AutoShutdownManager v4.9.7.1...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Auto Shutdown Manager လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....! မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာကို AUTO SHUTDOWN ချထားချင်ရင်တော့ ယူသွားလိုက်နော်...!ကျွန်တော် Portable ပါတွဲပြီးတင်ထားပေးပါတယ်...!အဆင်ပြေတဲ့ဟာသာ ယူသွားလိုက်ပါ...!14.49MB ရှိပါတယ်...! Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...!ယူချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!မူရင်းဆိုဒ်ကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် "ဒီနေရာမှ..." သွားရောက်နိုင်ပါတယ်...!
"Auto Shutdown Manger..."
"S Timer Portable..."
No Response to "AutoShutdownManager v4.9.7.1...!"